Maxkamadda ciidamada oo xukuntay rag dhac u geystay xarun ganacsi | Dayniile.com
Home Warkii Maxkamadda ciidamada oo xukuntay rag dhac u geystay xarun ganacsi
Faarax Cabdullaahi Calasow “Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed “Camey” ayaa markii ugu horraysay ka soo Muuqday Camerada Carwa Kaah Electronic oo ku taal degmada Hodan gaar ahaan Taleex 29-kii June Sanadkan iyaga oo dhac u gaysanayo Carwada.
Faarax iyo Maxamed ayaa Carwada ka qaaday IPHONE, SAMSUNG iyo agab kale oo electronic ah oo qiima ahaan ku kacayo $12945 Dollar.
Laba Alifle Boliis Faarax Cabdullaahi Calasow “Faaraxey” ayaa u gacan galay Ciidamada Dowladda labadii July oo isla xilligaasi lagu wareejiyay Hay’adda dambi baarista Boliiska CID.
Maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda 12-kii Bishan.
Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo kamid ah Xeer Ilaaliyaasha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane ee midi baxsadka yahay in ay magaallada dhac baahsan ka gaysteen balse ay tahay Camerada kaah meesha kaliya ee laga helay cadayntooda, waxa uu sidoo kale soo bandhigay dambiya kale oo uu gaystay eedeysanaha Maxkamadda hor taagan sida dhaawac uu hore dhibane ugu gaystay.
Previous articleDowladda China oo Soomaaliya soo gaarsiiyay $4 million oo gargaar binu Aadanimo.
Next articleDEG DEG: Maamulka PUNTLAND oo go’aan ka soo saartay 14 nin oo loo haystay Al-Shabaabnimo
The BBC's home affairs correspondent was accused yesterday of trying to downplay the suspect's reported Somali origins. As Dominic Casciani covered the crime, social-media users...
Egypt extradites a suspect to the United States to face charges...
DILKA WARIYE ABDI AZIIZ MA WUXU AHAA SHIRQOOL DOWLADEED IYO SHAATI...
Madaxweyne Kenyatta oo shaqada ka eryay taliyaha xabsiyada dalkaas Wycliffe Ogallo.
Myanmar’s junta has leveled five fresh allegations against Aung San Suu...
Oohinta Abiy & Indha Adayga Farmaajo
Maxaa ka soo baxay kulanka midoowga Musharaxiinta iyo Golaha Wadatashiga Qaranka.
axmed shiikh - January 9, 2022 0